मदन पुरस्कार विजेताको सुझाव : प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सोझै जनतासम्म पुग्नुपर्छ
– नरबहादुर साउँद
विक्रम सम्वत् २०३५ सम्म नेपालले करीब ३ लाख मेट्रिक टन चामल निर्यात गथ्र्याे । २०३७ सालदेखि नेपालले चामल आयात गर्न थाल्यो । नेपाल कसरी चामल निर्यातक देशबाट चामल आयातक देश बन्यो भन्ने विषयमा जनसंख्या वृद्धि, उत्पादकत्वमा न्यून वृद्धि र कोदो, फापर, मकै, मादराजस्ता मोटो अन्नको सट्टा चामल नै खाने गरिनाले हो भन्ने गरिन्छ । अन्नको आयात रोकेर आत्मनिर्भर बन्न सरकार र कृषकहरूले निम्न कुरामा ध्यान दिने कि ?
१) प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग
आजभन्दा ३–४ दशकपहिले नेपालमा रासायनिक मलको प्रचलन थिएन । किसानहरूले माटो मलिलो बनाइराख्न प्रशस्त गोठे मल प्रयोग गर्थे । विशेषतः बर्खाको समयमा गोठमा सोत्तर प्रयोग गरी गोठे मल उत्पादन बढाउने गर्थे । मलबिना पर्याप्त उत्पादन हुन सक्दैन भन्ने विषयमा चिन्तित रहन्थे ।
यसैले दूध र मल उत्पादनका लागि गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा पालनलाई निकै महत्त्व दिन्थे र सोत्तरको बिछ्याएर प्रशस्त मल उत्पादन गर्थे । यसले गर्दा खेतबारीको माटो मलिलो र उत्पादनशील भइरहन्थ्यो । यद्यपि गोठे मलको थुप्रो आँगनमा खुला ठाउँमा बनाइने हुनाले घाम र वर्षाको असरले पोषकतत्त्वहरू उडेर चुहिएर नष्ट हुनाले मल त्यति गुणस्तरीय बन्दैन्थ्यो होला । मललाई घामपानीबाट बचाउन थुप्रोमाथि छाना अवश्य चाहिने रहेछ ।
माटो उब्जाउ र स्वस्थ रहेमा मात्र खाद्य र पोषण सुरक्षा हुन सक्छ ।
माटोको उर्वराशक्ति र स्वास्थ्य बढाई दिगो उत्पादन प्रणाली विकास गर्नका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ । आजभोलि कृषकहरू बजारबाट रासायनिक मलका बोरा बोकेर ल्याई सजिलो र अल्छे खेती गरिरहेका छन् । यसले गर्दा माटोको जलधारणक्षमता, दानेदारपना, कोमलता र बुरबुरेपना नष्ट हुँदै गएको छ, माटो कडा र कम उब्जाउ बन्दै गएको छ ।
माटोले हामीलाई अन्न, दाल, तेल, कपास, चारा, तरकारी, फलफुल जे चाहन्छौं त्यही दिने भएकाले माता भूमिः पुत्रोक्हं पृथिव्याः (भूमि मेरी आमा म उनको पुत्र) भनिएको छ । माटो उब्जाउ र स्वस्थ रहेमा मात्र खाद्य र पोषण सुरक्षा हुन सक्छ ।
यसैले सरकारले माटो स्वस्थ र उत्पादनशील राख्नका लागि प्राङ्गारिक मल र सूक्ष्मजैविक मलहरूको उत्पादन र प्रयोग बढाउने नीति र कार्यक्रम बृहद् स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा गरिएको लगानीले भविष्यमा कृषि क्षेत्रले धेरै लाभ र आड प्राप्त गर्नेछ ।
२) गह्राहरूको समतलीकरण
गह्राहरू समतल नहुनाले माटोमा प्रयुक्त मलहरू र मलिलो माटो बगेर नष्ट भइरहेका छन् । यसैले गराहरूको समतलीकरण गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपलब्ध जेसीबी, ब्याकहो आदि उपकरणहरू त्यसै थन्क्याएर राख्नुको सट्टा कृषकहरूको गरा समतलीकरण गर्नमा प्रयोग किन नगर्ने ? सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले गरा समतलीकरण गर्ने उपकरण खरीद गर्न बजेट किन नछुट्ट्याउने ?
आजभोलि मिश्रित पीठो बढी पोषिलो हुन्छ भन्ने जनचेतना बढ्दै गएकाले मोटो अन्नले बजार पाउने प्रशस्त सम्भावना छ ।
लेजर लेभलरको प्रयोग गरी गराहरूको उपयुक्त समतलीकरण गरी मल र पानीको सदुपयोग क्षमता वृद्धि गरी उत्पादन बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसका लागि कृषकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
३) बासमती धान
देशमा बासमती चामलको माग बढ्दो छ । बासमती धानको खेती परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको हो । स्थानीय धानहरूको प्रयोग गरी पुड्का र चाँडै तयार हुने (१२० दिनमा) बासमती धानका जातको विकासमा ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
(भारतमा १२० दिनमा तयार हुने बासमती धान पुसा बासमती १५०९, पुसा बासमती १६१२, पुसा बासमती १६०९ र १३० दिनमा तयार हुने पुसा बासमती १६३७ प्रचलित छन् । यिनबाट ४०­५० क्विन्टल प्रतिहेक्टर उत्पादन हुने भनिएको छ ।)
४) धानको बीउ
सुक्खा धानको बीउमा अंकुरण कम हुने समस्या देखिएको छ । धानको बीउ उन्मोचन गर्दा पर्याप्त परीक्षणहरू नभएको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा सिफारिस भएका धानभन्दा किसानले सर्जु (५२ बढी रुचाएको देखियो । नेपालका धान वैज्ञानिक र बाली प्रजनन् विज्ञहरूले बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५) मोटो अन्नको उत्पादन र उपभोगमा जोड
कोदो, फापर, मकै, जौ, उवा, मादरा, चिनु, कागुनु आदि अन्नहरू धान र गहुँभन्दा बढी पौष्टिक भए पनि यिनको उत्पादन र उपभोग निकै कम भएको छ । यी अन्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर र बजारको पनि सुनिश्चिता गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आजभोलि मिश्रित पीठो बढी पोषिलो हुन्छ भन्ने जनचेतना बढ्दै गएकाले मोटो अन्नले बजार पाउने प्रशस्त सम्भावना छ ।
६) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरकण परियोजना जनतासम्म पुग्नुपर्यो
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सोझै सर्वसाधारण कृषकसँग सम्पर्कमा रहनुपर्छ । सहकारी र समूहमा भ्रष्टाचार र पक्षपात हुने र तिनले सर्वसाधारण कृषकसँग सम्पर्क नराख्ने गरेको पाइन्छ । यसैले परियोजनाले आफ्नो कार्यभार अरुको काँधमा बिसाएर हुँदैन । कृषकहरूलाइ समेट्ने र कृषि उत्पादन बढाउने कसरी भन्ने कुरामा कार्यनीति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
(लेखक साउँद मदन पुरस्कार विजेता कृषि प्राविधिक हुन् । साउँदले कृषि विधामा लेखेको ‘नेपालका बालीनाली र तिनको दीगो खेती’ पुस्तकका लागि २०६६ सालको मदन पुरस्कार पाएका हुन् ।)